dayniile » #Xiriirka_sii_xumaanaya_ee_Turkiga iyo #Israa’iil
#Xiriirka_sii_xumaanaya_ee_Turkiga iyo #Israa’iil
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkey, ayaa u yeeray Safiirka Israel ee fadhiya Istanbuul kuna wargeliyey inuu ka baxo dalkiisa Turkiga muddo aan la cayimin.
Wasaaradda Arrimaha dibadda Israa’iil ayaa u yeertay Qunsulka Turkiga ee Israa’iil fadhiya kuna war-geliyay inuu ka baxo Israa’iil muddo yar.
Taariikh yar oo kooban xiriirka Turkiga iyo Israa’ii.
Turkiga iyo Israa’iil, waxa ay leeyihiin Xiriir aad u wanaagsan oo sal adag ku taagan laga soo bilaabo kolkii Israa’iil xooga ku dagtay dhulka Falastiin loona aqoon-saday Dowlad 1948.
Dalkii ugu horreeyay ee ka mid ah dalalka islaamka ee aqoonsada Dowladda Israa’iil, wuxuu ahaa dalka Turkiga sanadii 1949, Sidoo kale dalkii labaad ee aqoonsada Israa’iil wuxuu ahaa dalka Iiraan sanadii 1949, Safiirkkii ugu horreeyay oo turki ah ee loo diro Israa’iil waxaa lagu magacaabi jiray Seyfullaah sanadii 1950.
Heshiiska Turkiga iyo Israa’iil 1950
Turkey iyo Israa’iil, waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo muhiim ah oo dhanka dhaqaalaha, difaaca Millatariga, xog is-dhaafsiga Sirdoonada, iyo Diplomaasiyadda, Sidoo kale Turkiga iyo Israa’iil, waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo iskaashiga Millatariga, heshiiskaasi oo dhigayay sida tan:
1- is dhaafsiga qubaradda dhanka Ciidamadda Millatariga nooc-yadooda kale duwan.
2- in ay ka shaqeeyaan labada dal is dhaafsiga Cilmiga istiraatiijiyadda dagaalka iyo in ay si wada jir ah u sameeyaan dhoolatus ciidan, oo ay ku jiraan Ciidamadda badda, cirka iyo kuwa dhulka.
3- In dowladda Turkiga ay iibsato hubka Israa’iil ee casriga ahaa waqtigaas, Israa’iilna ay ka caawiso Turkiga xeridda qalabka difaaca cirka iyo qalabka la dhigo badda hoosteeda ee difaaca ah iyo carbiska Ciidamadda turkiga ee qalabka lagu wareejin doono.
Khilaafkii ugu horreeyay ee Turkiga iyo Israa’iil
Khilaafkii ugu horreeyay ee Turkiga iyo Israa’iil dhex-maray wuxuu ahaa, dagaalkii ku dhexmaray Israa’iil iyo Falastiin gudaha dalka Lubnaan Sanadii 1982, Ciidamadda Israa’iil waxa ay ku guulaysteen in ay gudaha u wada galaan dalka Lubnaan, iyaga oo go’doomiyay magaaladda Caasimadda ah ee Beirut muddo saddex bilna ku garaacayeen Madaafiic iyo Gantaallo ay kaga soo ridayeen dhinaca badda iyo dhulka, taas oo aaqirkii keentay in hoggaankii sare ee Uurka xoraynta Falastiin ay ogolaadaan soo jeedin ah, in marin aamin ah loo sameeyo ciidamadda hubaysan ee wax-iska-caabbinta si ay uga baxaan dalka Lubnaan.
Heshiiskan lagu dhex-dhexaadiyay Lubnaan, Falastiin iyo Israa’iil, waxaa ka shaqeeyey oo gar-wadeen ka ahaa Madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka ninka lagu magacaabo Ronald Reaga, Dagaalkaasi lagu soo afjaray dalka Lubnaan, waxaa ku dhintay 14 kun oo qof oo isugu jirta Lubnaan iyo Falastiin halka Israa’iil ay kaga dhinteen in ka badan 400 oo qof, 1985 ayuu si rasmi ah u istaagay dagaalkaasi lagu hoobtay.
Dalka Turkiga, ayaa ka xumaadeen dagaalkaasi cir iyo dhul ee Israa’iil ku soo qaaday Dalka Lubnaan iyo Ururadda Falastiin ee Xarumaha ku leh Lubnaan, taas oo markii dambe Turkidu keentay in ay la baxaan Safiirkoodii u fadhiyay Israa’iil 1982, Ugu dambeyntii Wada hadalo waqti dheer qaatay kadib 1992 ayaya la soo noqdeen Turkiga safiirkoodii u fadhiyay Israa’iil.
Turkiga oo ka codsaday Sirdoonka Israa’iil ee Muusaad in ay u soo qabtaan Hogaamiye Mucaarad Turki ah oo banaan joog ah.
Cabdullaahi Owjalaan, wuxuu ahaa Hoggaamiyihii aas-aasay Xisbiga PKK ee dalka Turkiga, Sidoo kale wuxuu ahaa nin Siyaasi oo madax ka ah Uruka PKK, Sidoo kale, wuxuu ahaa nin u dooda xaq-duudsiinta lagula kacay Qowmiyadda Kurdiga ee dagan dalka Turkiga, isaga oo u doodayay in ay ka helaan Turkiga Maamul hoosaad iyo in ay iyaga ismaamulaan.
Cabdullaahi Owjalaan, dowladda Turkiga waxa ay ku eedeysay inuu yahay dilaa dilay 30-kun oo turki ah oo uu yahay nin Argagax-giliyay Muwaadiniinta Turkiga ee ku nool dalka iyo dibadda.
Cabdullaahi Owjalaan, wuxuu ku noolaa oo u soo baxsaday dalal dhowr ah oo mar waliba looga daba tagayay dalalkaas si ay ugu soo gacan giliyaan dalka Turkiga ninka la doon doonayay, dalalka uu tagay Owjalaan waxaa ka mid ah Suuriya, Ruushka, Talyaaniga, Jarmalka iyo Giriiga, intaas oo idil waxaa daba socday Muqaabaraadka Israa’iil ee Moosaad.
Cabdullaahi Owjalaan, wuxuu u soo duulay dalka Holland si uu u waydiisto magan-galyo Siyaasadeed, Holland waxa ay u diiday in ay siiso magan-galyo Siyaasadeed islamarkaana u diiday inuu Holland gudaha u soo galo.
Cabdullaahi Owjalaan, waxaa laga celiyay Garoonka diyaaradaha Amsterdam ee dalka Holland, waxaana la saaray diyaarad ay leedahay Holland “KLM” una socota dalka Kenya, Ninkii Garoonka diyaaradaha Amsterdam haystay ayaa u gudbiyay nin ka tirsan Sirdoonka Moowsaad kiiska ninkan .
Ugu dambeyntii Cabdullaahi Owjalaan, waxaa lala soo raacay diyaaradii uu saarnaa, waxaana lagu qabtay Magaaladda Nairobi ee dalka Kenya Sanadii 1998, Sirdoonka Moowsaad ee Israa’iil turkiga ayay ku war-giliyeen in ay qabteen Hoggaamiyihii Cabdullaahi Owjalaan, 1999 ayaa loo gacan giliyay turkiga, laguna xukumay xukun dil ah.
Ganacsiga u dhaxeeya Turkiga iyo Israa’iil
Sanadii 2000 Turkiga iyo Israa’iil, waxa ay wada galeen heshiiskii ugu wayna ee Gobalka bariga dhexe ee dhanka ganacsiga xorta ah oo illaa manta u dhaxeeyo Turkiga iyo Israa’iil, Turkiga Israa’iil qiimaha ganacsi ee u dhaxeeyaa wixii ka horreeyay sanadii 2000, wuxuu ahaa 300 boqol oo malyan oo doollar Sanadkii, balse wixii ka dambeeyay sanadkaas illaa maanta xajmiga Ganacsiga ee u dhaxeeya labadaasi, wuxuu gaaray 4 Bilyan dollar sanadkii.
Soo bixiddii Mudane Rajb dayib Erdogan iyo Xisbigiis Cadaaladda iyo Horumarinta ee Turkiga.
Markii la doortay Xisbiga taladda dalka turkiga haya ee Cadaaladda iyo Horumarinta ee uu hormuudka u ahaa Erdogan sanaddii 2002, xisbiga, waxa ay dib u sii saxiixeen heshiisyadii lala galay Israa’iil, iyaga oo sii adkeeyay xiriirka ay la leeyihiin Israa’iil, iyaga oo ka baqay haddii ay fara fareeyaan Heshiiska in lagu kaco, maadaama ay saaxadda Siyaasadda ku cusub yihiin.
Turkiga iyo Israa’iil Khilaadkoodii labaad 2009
Sanadii 2009-kii, waxaa xumaaday xiriirka Turkiga iyo Israa’iil, kadib markii Israa’iil duulaan ku soo qaaday magaaladda Gaza ee Falastiin, iyo duulaankii ay ku soo qaaday Markabka turkiga uu leeyahay Mavi Marmara oo siday gargaar cuno, daawo iyo shidaal oo ku sii jeeday Gaza, Falastiin.
Duulaankaasi lagu soo qaaday Markabka turkiga ee Gaza u siday Gargaarka, waxaa ku dhintay 10 ruux oo shaqaalaha Markabka ah? Halka kuwii kale ee Markabka la socday la afduubtay markabkiina lala wareegay.
Turkiga ayaa aad uga xumaadey falkii ay ku kaceen Ciidamadda sida gaarka u tababaran ee Israel ay ku weerareen markabka Mavi Marmara, Sidoo kale Israa’iil ayaa xiligaasi sheegtey in Turkiga uu jebinayay xayiraaddii saarneyd isku socodka marinka Gaza ee Falastiin, isla markaana ciidamadda Israa’iill ay fureen rasaas ay isku difaacayeen.
Dowlada Turkiga ayaa dalbatey raali gilin buuxda iyo in Mag-dhow la siiyo qoysaskii laga dilay Wiilasha iyo dhowr kale oo la dhaawacayba.
Wada xaajood waqti badan qaatay ayaa ka furmay oo ka bilowday dalka Talyaaniga Horaantii sanadkii la soo dhaafay ee 2016, kadib markii Israa’iill ay raali gilin buuxda siisay Dowladda Turkiga, Sidoo kale Turkiga ayaa aqbalay raali gilinta Israa’iil, balse dalbaday Mag-dhow gaaraya 30 Milyan oo dollar.
Mag-dhowga Turkiga dalbaday ayaa laba jeer ka badnayd 15 Milyan oo dollar oo ay hore Israa’iil u oggolaatey in ay bixiso, balse ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaare Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa go’aansaday inuu lacagta Mag-dhowga gaarsiiyo 23 Milyan oo dollar, si heshiis loo gaaro.
Isku soo dhawaansho kadib Turkiga iyo Israa’iil Magaalada Ankara gaar ahaan Xarunta Wasaaradda Arrimaha dibadda Turkiga waxa ay ku gaaraan Heshiis dhowr qodob ka koobnaa, ugu dambeyntii Heshiiska ay gaareen labada dhina baarlamaanka Turkiga ayaa la hor-geeyay si ay u ansixiyaan Heshiiska, maalmo kadib Baarlamaanka, wuxuu ansixiyay heshiiska , Sidoo kale Baarlamaanka Turkiga waxa ay soo jeediyeen in labada dhinac is dhaafsadaan Safiiro cusub si xiriirka Diplomaasi u shaqeeyo, soo jeedinta kadib labada dhinac waxa ay is dhaafsadeen Safiiro Cusub oo kala fadhiistay Magaalooyinka Ankara iyo Tel Aviv.
Mar sii horreysay Madaxweyne Rajab Dayib Erdogan, oo meel fagaare ah iyo mar la wareysanayayba soo hadal qaaday xiriirka cusub ee soo wanaagsanaaday ayaa yiri ” Israa’iil waxa ay u baahan tahay dal sida Turkiga oo kale u wayn inagana waxaan u baahannahay dalka Israa’iil, marka labadeena dal way isu baahan yihiin”
Khilaafka sedexaad ee Turkiga iyo Israa’iil ee 2018
Maanta Waxaa jira khilaaf u dhaxeeya Turkiga iyo Israa’iil, khilaafka waxaa keenay ee ugu wayn ayaa ah in Israa’iil Mareykanka kula talisay in Safaaradooda ku taal Tel Aviv laga soo raro oo loo soo raro ama loo soo wareejiyo Magalaadda barakeysan ee Qudus, si Israa’iil loogu aqoonsado Qudus in ay tahay Caasimadda Israa’iil.
Mareykanka oo ka jawaabaya codsiga uga yimid Israa’iil ayuu soo rartay Safaaradiisii ku taal Magaaladda Tel Aviv, isaga oo u soo wareejiyay maalintii Isniinta aheyd ee la soo dhaafay Magaaladda barakeysan ee Qudus, Falastiin.
Xafladda lagu wareejinayay Safaaradda Mareykanka ee Qudus, waxaa goob joog ka ahaa wareejinteeda gabadha uu dhalay Donald Trump ee lagu magacaabo Ivanka Trump iyo ninkeeda Jared Kouchner.
Sidoo kale iyana xafladaas, waxaa ka qeyb-galaya Wasiirka Maaliyadda Mareykanka Stephen Menuchin iyo kuxigeenka Wasiirka Arrimaha dibadda Mareykanka ninka lagu magacaabo John Sullivan iyo 12 xubnood oo ka tirsan “Congress” Gongareeska Mareykanka.
Sidoo kale dowladihii ka qeyb-galaya ee lagu marti qaaday Xafladda wareejinta waxaa ka mid ah
11- Democratic Republic of the Congo
12- Cote d’Ivoire
Inta ay socotay Xafladda wareejinta Safaaradda Mareykanka ee Qudus, waxaa isu soo baxay Falastiiniyiin ka careysan falka uu sameeyay Mareykanka, isu soo baxaas oo markii dambe isu badalay mid dhiig badan ku daatay, kadib markii Israa’iil ay adeegsatay rasaasta nool nool iyo diyaarado dagaal.
Taas oo keentay in Turkiga aysan iska fiirsan gumaadka ay sameyneyso Israa’iil taas oo sababtay markii dambe in xiriirkii soo hagaagayay ee u dhaxeeyay Turkiga iyo Israa’iil uu halkaas ku burburay, Safaaradahana ay kala qaataan, Hawadana ay isu marinayaan hadalo cay ah.
Turkiga iyo Israa’iil, waa labo saaxiib oo aan sinnaba u kala maarmin oo isu baahan, balse in uu xumaado xiriirkooda, waxaa sabab u ah mar walba arrinta Falastiin, Turkiga waa in caalamka Islaamka iyo caalamka Carabta ay uga mahad celiyaan halka uu ka taagan yahay Arrinta Falastiin.
Sidoo kale Taariikhda waxaa ku cusub oo ah markii ugu horreysay, in Israa’iil ay raali gilin iyo Mag-dhow ka bixiso xasuuq ay u geysteen Bashar, Bini’aadam nool.
Xuquuqda Qoralka Walakey Qoraa: Abdinasir Saabuun.